Rikoooo.com - Search - Gh0stRider203
Nchịkọta ụlọ search
Nchoputa achoputara ndi ozo nke 213
Gaa na nchọta elu
Gaa na peeji nke:
17 Dis 2019, 18:23
Nzuko: Flight Simulator X (FSX) + Steam mbipụta & Prepar3D ruru v3
Topic: Mee n'ime FSX
zaghachiri, sị: 13
Mee n'ime FSX
ọ bụrụ na ndị dị ndụ anaghị egosiputa, mgbe ahụ ịkwesịrị idezie folda ọdụ ụgbọ elu.cfg ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ
Gaa na post
18 Jenụwarị 2019, 20:05
Topic: 747-8 Ndị na - ere ihe na - ezuru onwe ha na ọdịda
zaghachiri, sị: 1
747-8 Ndị na - ere ihe na - ezuru onwe ha na ọdịda
kedu ihe ị ga-eme mgbe ị na-asọda? echiche ọ bụla? Amaara m na mgbe ụfọdụ, ha agaghị akwadebe ma ọ bụrụ na ọ dị oke nro ọbịbịa ... ma ọ bụ ya mere a gwara m. Enwebeghị m nsogbu ọ bụla ....
18 Jenụwarị 2019, 20:00
Topic: 747-8F Na-aga mgbe a kwadoro ya?
zaghachiri, sị: 2
747-8F Na-aga mgbe a kwadoro ya?
na-ekwu okwu ogbi kama ọ bụ ebe ị na-egwu egwu?
18 Jenụwarị 2019, 19:35
Nzuko: Aro Box
Topic: 737 winglets
zaghachiri, sị: 4
18 Jenụwarị 2019, 19:34
Nzuko: Welcome Ọhụrụ So
Topic: ntinye ụgbọ elu ọhụrụ
ntinye ụgbọ elu ọhụrụ
16 Nọvemba 2018, 23:16
Nzuko: Prepar3D v4 na v5 (64 ibe n'ibe)
M nwere PMDG 747-400, 737-6 / 7 / 800 na 777-2 / 300 na naanị onye nwere igbe nkesa 2D, bụ 737.
15 Ọkt 2018, 04:11
Anyị adịghị eme ụgbọ elu ma ọ bụ ihe ngosi ebe a. Anyị nwere obiọma dị ka ebe nchekwa iji kwuo ya, dị ka Flight Sim, AVSIM, wdg ......
07 Ọkt 2018, 16:52
Topic: Biko ... 777 na 767 maka P3D V4 ...
zaghachiri, sị: 3
Biko ... 777 na 767 maka P3D V4 ...
26 Ọgọst 2018, 15:26
26 Ọgọst 2018, 15:18
Topic: Dinggbakwunye Scenery na FSX
Dinggbakwunye Scenery na FSX
FSX Mbipụta ọla edo bụ FSX Ọkachamma, PỌTA na ngwangwa Add-on Ibu. Nweghị ike iji osooso ya add-on jiri ya belụsọ ma i tinyelarịrị ngwugwu ọrụ ahụ.
Ihe niile na-aga n'otu ebe dị ka ọ na-eme mgbe niile, n'agbanyeghị ihe OS gị.
ngosipụta: Nsonaazụ niile1 ụbọchị7 ụbọchị2 izu1 ọnwa3 ọnwa6 ọnwa1 afọ Họchaa site na: AuthorOge ezipụForumIsiokwu isiokwuIbu isiokwu Direction: -arịgoagbadata
▃▅▆▇ Dị Mkpa - Règles du Forum - Charte d'utilisation ▇▆▅▃.
↳ Gbanyụọ Jumbo
↳ chinchi na akara ngosi
↳ FSX, Amkpụrụ Steam & Prepar3D jusqu'à v3
Cours de Pilotage - Aides à la Igodo
Ihe ọmụmụ de Pilotage
↳ Organisation de vos vols en réseaux. Tù Na-achị Isi
Onye agha ụgbọ elu
✔ ✔ Nkwado
✖ ✖ Okwu Terminés
Cou Ọgbakọ Spéciaux
Ozi & Galeries Vainqueurs
Cou Ekwadoro Mmasị 5000
Le bar des ndị na-anya ụgbọelu
Pressentation des membres nke.
↳ ureaulọ ọrụ na-arụ ọrụ
↳ Nke a mere
Os Vos vols en ihe oyiyi
Le secrétariat de l'ozi
Flight Simulator X (FSX) + Steam mbipụta & Prepar3D ruru v3
2004 Flight Simulator XNUMX
↳ Kedu ihe na ebee ka ị fere taa